Documentry – Arakan Times
AT Burmese ကုလကိုယ်စားလှယ်နှင့် ရိုဟင်ဂျာအရေး
July 11, 2017	Leaveacomment 492 Views
ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Yanghee Lee သည် သူမ၏ ၆-ကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်အဖြစ် ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၉ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်။ မစ်စ်ယန်ဟီးလီး၏ခရီးစဉ်မှာ ဇူလိုင် ၉ရက်နေ့မှ ၂၁ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကို သွားရောက် လေ့လာရန် စီစဉ်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ မစ်စ်ယန်ဟီးလီးရောက်လာသည့်အခါတိုင်း စစ်အာဏာရှင်များက သူတို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက် အဖွဲ့ မဘသခေါင်းဆောင် ဝီရသူနှင့် တခြားအာဏာရှင် မဟာမိတ်အဖွဲ့ကို သုံးပြီး ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်လေ့ရှိ သည်။ ယခုအကြိမ်မှ ရခိုင်အစွန်းရောက်ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာအေးမောင်က စစ်အာဏာရှင်များကိုယ်စား ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအား စော်ကားခွင့်ပေး ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးစေသည်။ ရိုဟင်ဂျာအရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဟန့်တား ဆုတ်ယုတ်စေမည့် အလွန်အရေးပါသော ပြဿနာဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင် ရိုဟင်ဂျာ အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ...
Joint Statement on violations of Rule of Laws by NLD Government in Burma: NLD must ensure full protection of Rohingya with their genuine identity as indigenous ethnic people of Arakan
October 6, 2016	Leaveacomment 344 Views
We, the indigenous ethic Rohingya people of Arakan State, Burma, living in both home and exile are very much disappointed on undemocratic strategies against Rohingya and entire people of Burma as ruling National League for Democracy (NLD) Government is exercising undemocratic rules and regulation; even ignoring international human rights mechanisms and charters. Ruling State Councilor of Burma, Daw Aung San ...
Arakan Azad Force and Two State Theory
September 13, 2016	Leaveacomment 301 Views
By Aman Ullah The question of granting ‘State’ to Arakan was taken seriously by most of the Muslims as they feared that the Maghs would createa1942-like situation if they come to power in Arakan. In response, the Muslims of north Arakan demanded ‘autonomy’ of their region to be directly controlled by the Central government in Rangoon without the ...
Rangoon University Rohingya Students Association and Arakan Statehood
September 2, 2016	Leaveacomment 1,043 Views
By Aman Ullah Since 1060, there had given rise to political results which were also affected by the great hatred existing between the Muslims and the Buddhists in Arakan; the Muslims objected to the demand of the Arakan Party for the status ofastate for Arakan within the framework of the Union of Burma due to deep-seated suspicion existing ...
August 31, 2016	Leaveacomment 539 Views
By Amn Ullah “If two brothers cannot live together they must live apart independently of each other”. Sultan Mahmud Sultan Mahmud wasaprominent leader of Burma and Muslims of Arakan. He was born and brought up at Akyab and educated at Calcutta. Mr. Sultan Mahmud was ex-cabinet secretary, an important post in British India legislative Assembly. He contested in the ...
Sharing of the Authenticity of “Rohingya Identity” in Myanmar
August 30, 2016	Leaveacomment 365 Views
By U Kyaw Min Arakan Times: The Myanmar government has been denying the citizenship rights to Rohingya Muslims implying them that they are illegal immigrants from neighboring Bangladesh who intruded into Myanmar some years back although the historians prove that their existence in Myanmar for centuries according to the authentic history of Rohingya Muslims. Asaresult, it is an ...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်၏ မှားယွင်းသောဗျူဟာကြောင့် ရခိုင်ပြည်ခွဲထွက်မည်မှတ်
August 28, 2016	Leaveacomment 274 Views
ယနေ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အမိ မြန်မာနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်ရန် ရင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်လာခြင်းကို ဖန်တီးပေးခဲ့သူမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွန့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်မှာ ဗိုလ်ကြီးရာထူးဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မေယုခရိုင်တစ်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်များအပေါ် အမျိုးမျိုးသောစစ်ဆင်ရေးများ ဖန်တီးဆင်နွဲခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာများအား မွေးရပ်မှ ထွက်ပြေးစေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်၌ပင် ဘင်္ဂလားမှ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခေါ်သွင်းခြင်း၊ မူဆလင်များ၏ လယ်ယာမြေများကို သိမ်းပိုက်ကာ ဘင်္ဂလားမှ ခိုးဝင်လာသော ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအား အိမ်ဆောက်ပေးခြင်း၊ လယ်လုပ်စားရန် လယ်ယာမြေများပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ခိုးဝင်လာသူ ဘင်္ဂလီရခိုင် ဦးရေမှာ ယနေ့ထိ ၅သိန်းကျော်ဖြစ်လာပြီး ပြည်နယ်အတွင်းသာမက နိုင်ငံတော်အဆင့်တွင်ပါ ရာထူးကြီးများ၌ စံစားလျက်ရှိပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ ဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်း နတလ စီမံကိန်းဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ဝန်းတွင် နတလစံပြရွာများ တည်နေစဉ် ဘင်္ဂလားမှ ဘင်္ဂလီရခိုင်များ အများဆုံး ...
August 26, 2016	2 Comments 758 Views
By Aman Ullah A population Census is the process of collecting, compiling, analyzing and disseminating demographic, social, cultural and economic data relating to all persons in the country, ataparticular time in ten years interval. The History of Census began with 1800 when England had begun its Census but the population of dependencies was not known at that time. ...
Press Release: Rohingya Condemn and Reject Bogus History Book on Rohingya by ex-Military General, Khin Nyunt
August 15, 2016	Leaveacomment 974 Views
August 16, 2016 We, the undersigned Rohingya Organizations express our serious concern and strongly condemn and reject the bogus created history on Rohingya with fake episodes written by the ex-military general, Khin Nyunt concealing the reality and truths of Rohingya people to divert the attention and confuse the whole world including Myanmar amid realization of Suu Kyi led government regarding ...